Etu esi ebufe foto gi site na iCloud rue foto Google | Gam akporosis
Daalụ Apple, ọ dịla mfe ugbu a bufee foto gi niile site na iCloud rue foto Google. Ọrụ Google dị ka ihe ngosi na ọgụgụ isi nke nwere ike ịkọ foto n'onwe ya, nke bụkwa otu n'ime ngwa kachasị mma anyị nwere dị ka gallery; ọ bụ ezie na F-Stop Gallery ahapụwo anyị nke ọma.
Ma ọ bụ eziokwu na ruo ugbu a anyị nwere ike site na ngwa iOS ngwa, ọ dịbeghị mfe ịgafe ọbá akwụkwọ niile anyị nwere na iCloud na ngwa Google. Ya mere, anyị na-anabata na Apple ekpebiela inyefe ma ọ bụ Mbugharị a ihe na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe karị site na ọrụ ọ nyere anyị ga-akọwa.
1 Ọrụ dị na mpaghara
2 Etu esi ebufe foto gi na vidiyo gi niile site na foto iCloud na foto Google
Ọrụ dị na mpaghara
Ekwesiri iburu n'uche na site na Apple nkwado ọ na-akọ na nke a ọrụ erubeghị na mba niile, ma ha na-ebuga ya mpaghara mpaghara. Ndị a bụ mba ndị dị:
Nke ahụ kwuru, site na Apple n'onwe ya ka a dụrụ gị ọdụ na mgbe ị rịọrọ otu maka nnyefe foto gị na vidiyo ị debere na foto iCloud, ị ga-eburu n'uche na ọ nweghị faịlụ ndị ị debere na ya ga-efu. Nke ahụ bụ, a na-eme otu akwụkwọ na-enweghị karịa ka i wee nwee ncheta na onyonyo gị niile echekwara ugbu a na foto Google.
Ọ kwesịkwara icheta na ọrụ ahụ ọ ga-ewe ụbọchị nke 3-7 ka a ga-eme akwụkwọ zuru ezu nke onyonyo na vidiyo niile anyị nwere na Foto iCloud. Igbu oge ime nke a bụ n'ihi n'eziokwu na Apple gosipụtara na ị rịọrọ arịrịọ ahụ n'onwe gị, ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka foto dị nro jikọrọ na nzuzo gị dị ka onye ọrụ ma ọ bụ mmadụ.
N'ikpeazụ, ụfọdụ n'ime Smart Albums, Live Foto ma ọ bụ na usoro RAW, ha nwere ike ọgaghị adị mgbe ị nyefere ha na ọrụ ọzọ.
Etu esi ebufe foto gi na vidiyo gi niile site na foto iCloud na foto Google
Isi ihe anọ dị mkpa tupu ịga n'ihu na ị ghaghị ijide n'aka na ị mezuru ha
You're na-eji foto iCloud iji chekwaa foto na vidiyo na Apple
Apple ID gị na-eji nyocha nyocha 2-nzọụkwụ
I nwere otu Akaụntụ Google Kedu ihe ị na-eji na foto Google?
Tu Akaụntụ Google nwere ohere zuru oke iji mezue nyefe
Yabụ ọ bụrụ na rue taa ị ga-achọ ndụ n'ụzọ aghụghọ, mgbe ibudata foto wee bulite ha, ugbu a ihe niile dị mfe ma dị mfe:
Jiri Apple ID gị banye
Ugbu a họrọ "Nyefee otu data gị"
Soro windo mmapụta na-anabata
Will ga-ahụ nke ahụ ọrụ na-egosi gị ngụkọta counter nke foto na vidiyo echekwara na akaụntụ iCloud gị
Also ga-ahụkwa oke nke kopi ị ga-ebufe
Nabata nke ahụ
Ugbu a ị ga-echere maka ngosi site na email mgbe nyefe zuru ezu
Onye ukwu ọtụtụ ụdị dịka .jpg, png, .webp, .gif, ụfọdụ faịlụ RAW, .3gp, .mp4, .mkv na ndị ọzọ, enwere ike ịnyefe ya.
Maka ndị gị bụ ndị ọhụrụ gam akporo site na iPhone, anyị kwuru na Foto Google, ewepu iji nnukwu AI maka ịkọ aha na nhazi N'ime onyonyo niile, ọ nwere ọrụ foto dị elu na - akparaghị ókè, ọ bụ ezie na ọ ga - emesị nye ya mgbe June 1 nke afọ a 2021.
A oké ohere iji nyefee foto niile site na iCloud gaa na Foto Google ma si otú ahụ nwee ike ịnụ ụtọ ha site na ngwa ngosi ihe oyiyi Google na android.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Etu ị ga-esi nweta foto gị site na iCloud ruo foto Google na jiffy